Ahịa ụlọ amamịghe zuru ụwa ọnụ ga -eto ruo ijeri $ 137.9 n'ime afọ ise na -abịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ahịa ụlọ amamịghe zuru ụwa ọnụ ga -eto ruo ijeri $ 137.9 n'ime afọ ise na -abịa
Nnyocha nyocha ahịa nke Zion bipụtara akụkọ nyocha ọhụrụ akpọrọ “Smart Home Market- Site na Ngwaahịa (Smart Kitchen, Security & Access Control, Control Lighting, Health Home, HVAC Control, na ndị ọzọ): Echiche ụlọ ọrụ ụwa, nyocha zuru oke na amụma, 2020- 2026 ”. Dabere na akụkọ ahụ, a na -atụ anya nha ụlọ ahịa smart ga -eru $ 137.9 ijeri site na 2026 site na $ 85.6 ijeri na 2021, na CAGR nke 10.4% n'oge amụma.
Nnyocha ahịa ahịa Zion bipụtara akụkọ nyocha ọhụrụ akpọrọ “Smart Home Market- Site na Ngwaahịa (Smart Kitchen, Security & Access Control, Control Lighting, Health Home, HVAC Control, na ndị ọzọ): Echiche ụlọ ọrụ ụwa, nyocha zuru oke na amụma, 2020- 2026 ”. Dị ka akụkọ si kwuo, ndị smart ụlọ ahịa A na -atụ anya nha ga -eru ijeri $ 137.9 site na 2026 site na $ 85.6 ijeri na 2021, na CAGR nke 10.4% n'oge amụma.
Dị ka ndị nyocha na Zion Market Research si kwuo, isi ihe na -akwalite maka ahịa ụlọ mara mma gụnyere mmata na -arịwanye elu n'etiti ndị ọrụ banyere oriri ike, ịrị elu ego a na -enweta na mba ndị na -emepe emepe, ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị agadi na mmemme gọọmentị n'etiti ndị ọzọ. Ewezuga nke a, mmụba na -achọ nlekọta ahụike ụlọ na -enye ike mmepe nke ahịa ụlọ mara mma. N'aka nke ọzọ, ogologo oge nnọchi ngwaọrụ na ọnụ ahịa dị elu nke ejiri ikike ndị ọrụ amachibidoro bụ ihe ịma aka kachasị na-egbochi ahịa ụlọ mara mma site n'ịgbanwe gaa n'ọkwa nkuchi site na mmalite mmalite.
Ka o sina dị, ngwaahịa ọhụrụ sitere na ndị na -ere ahịa na -abawanye asọmpi, si otú a na -akwalite mmepe nke ahịa ụlọ mara mma. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnwa Ọgọst 2018, Philips Hue kwupụtara ọtụtụ ọkụ amamịghe ọhụrụ na -akwalite mmepe nke ahịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
A na -eme nkewa nke ahịa ụlọ mara mma dabere na mpaghara na ngwaahịa. Akụkụ ngwaahịa dị na ahịa ụlọ mara mma bụ ahụike ụlọ, kichin mara mma, njikwa HVAC, njikwa ọkụ, na ndị ọzọ. Njikwa ọkụ jidere oke ahịa n'ahịa ụlọ mara mma n'ihi mbelata ojiji ọkụ eletrik n'ụlọ. Sensọ ọkụ na -ahazi oke ọkụ ọkụ dị ka ike ọkụ sitere n'okike, yabụ na -agbada ojiji ike na ịkwalite ahịa ụlọ mara mma.
North America jidere akụkụ kasịnụ nke ahịa ụlọ mara mma n'ihi ịba ụba nke ndị mmadụ na ịrị elu nke nlekọta ahụike ụlọ. Europe bụ otu ụlọ ahịa smart smart ka ọ na -achụso North America. Ebumnuche gọọmentị na North America gụnyere ịchịkwa mita ọkụ, gas, na mmiri ka ha wee banye n'ụzọ dị mfe. Ichekwa ume & ọnụ ahịa, ọnụ ọgụgụ ndị agadi, ịdị mma, nchekwa, atụmatụ gọọmentị, na ikuku anwụrụ ọkụ belatara bụ ndị na -akwalite mmepe ahịa ụlọ mara mma n'afọ ndị na -abịa. A na -ezukwa Asia Pacific iji gosipụta mmepe dị ịrịba ama n'ahịa ụlọ mara mma n'afọ ndị na -abịa.
Companieslọ ọrụ ndị ama ama n'ahịa ụlọ mara mma bụ Siemens AG, Legrand, Ingersoll-Rand plc, Johnson Controls Inc., Acuity Brands, Inc., Schneider Electric SE, United Technologies Corporation, ABB Ltd., Nest Labs, Inc., Samsung Electronics. Co., Ltd., Crestron Electronics, na Honeywell International Inc. n'etiti ndị ọzọ. A na -ekwu na ndị egwuregwu a na -abawanye ahịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.